Iincwadana ezi-5 zoncwadi lolutsha kuzo zonke izinto ozithandayo. | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha
Iinoveli zoncwadi lolutsha.
Kwakhona Abafundi be-ESO kunye neBaccalaureate bayaligqiba ikhosi, esele enazo iinketho ezichazwe ngakumbi kunye nokukhethwa. Kukwanjalo ke nakwizihloko ezitsha kuncwadi lwabo. Ngaphezulu kancinci kunoko ukuvuthwa, iimvakalelo ezichaseneyo y ungquzulwano lwakho yamaxesha abadlula kuwo. Makhe sibone ukuba athini la mabali.
1 Uncumo lwentlanzi yamatye - uRosa Huertas
2 Amagqwirha. Iibhondi zoMlingo-Tiffany Calligaris
3 Intuthumbo ka-Alex - u-Elena García
4 Amaphupha azaliseka-URachel Galsan
5 Ubusuku bamehlo akho-uSandra Andrés Belenguer
Uncumo lwentlanzi yamatye -Rosa Huertas
Ukujolisa kubafundi be I-12 ukuya kwi-17 iminyaka, yayiyinoveli ephumeleleyo ye- Ibhaso leXIV Anaya loNcwadi lwaBantwana naBantu aLutsha.
Xa utat'omkhulu esweleka, uJaime ufumanisa ukuba kukho imfihlo yosapho egcinwe ngunina iminyaka. Kwiminyaka engamashumi asibhozo, umama kaJaime wafumana into angazange amxelele unyana wakhe. Ngubani kanye kanye utata kaJaime? UJaime unokwazi kuphela i-verdad Enkosi ku diario kumama wakhe.
Sijongene nebali kunye umculo wamashumi asibhozo imvelaphi kwaye okusingqongileyo kunye neyona ndawo yomfuziselo yento eyayibizwa ngokuba yi yasebusuku Madrilenian. Kulula kumfundi oselula ukuzichonga kuye, kuba uthetha nge ubudlelwane kunye neengxabano ezenzeka kwifayile ye- ukufikisa.
Amagqwirha. Ubuhlobo bobugqi -Tiffany Calligaris
Ukusuka 14 iminyaka esi sihloko sithi 4º yalo mbhali waseArgentina kunye naye saga Wit Witches.
Unyaka wesibini ka Madison kwiYunivesithi yaseVan Tassel eBoston kwaye uqeshe indlu encinci noLucy, umhlobo wakhe osenyongweni ukusukela ebuntwaneni. Yonke into ilungile de UMichael Darmoon Uwela ubomi bakhe kwaye iibhalbhu zokukhanya ziyaqhuma… ngokoqobo. Ngaba kunjalo ukuthanda umntu ukuqala ukumbona okanye enye into? Intoni imfihlo Ngaba uMichael uyafihla? Ekuphela kwento anokuthi ayifune kukuba le ayizukuba yikhosi efana nale yangaphambili kwaye ubomi bakhe buya kutshintsha ngokupheleleyo.
Wahlala e Salem Eli bali linezithako zonke qhubeka ubambe kwabo sele besazi isaga.
Intuthumbo ka-Alex -U-Elena Garcia
Iqulunqwe kwinoveli yolutsha kunye nothando, esi sihloko siyi- Amanzi ukusuka ngo-2016 (yenziwe eqongeni Wattpadeye yaphumelela kakhulu. Kwabatsha kuyacetyiswa ukuba bayifunde incwadi yangaphambili, UGqirha Engel.
Las ukungakhathali Bayabhatalwa kwaye yinto leyo ngelishwa, uAlex uyazi kakuhle. Indoda ehlaselwa sisigqibo esibi. Isithembiso ekunzima ngakumbi ukusigcina kunye nemvakalelo awayecinga ukuba uyilibele isoyikisa ngokuqhakaza kwakhona ngaphakathi kuye ... Intoni mfihlelo gcina uAlex ongaqondakaliyo kwaye ngubani lowo mujer yintoni le imphambanisayo?
Amaphupha ayafezekiseka - URachel Galsan
Idalwe nakwithagethi yabafundi beWattpad ukusuka kwiminyaka engama-12. Ifumene ngaphezulu kwe-XNUMX yezigidi zokujonga xa yayipapashwa okokuqala. Abathandi, abasebenzisi kunye nabalandeli be YouTube unayo kule ibali lothando kunye noloyiso okona kufundwayo kwakho.
Umthumeli uyintombazana eye yasokola kakhulu. Kodwa xa usapho lwakhe ludlulela eMadrid kwaye uqala kholeji, ubomi bakho buyatshintsha. Ufuna ukuphucula umfanekiso wakho, zijikeleze nabahlobo bakho kwaye ube umyili, kodwa kuyacaca ukuba ummelwane wakhe weleli yile YouTube ngeSpanish edume kakhulu kwihlabathi. Unezigidi zabalandeli, ubhale iincwadi ezininzi, kwaye uyabonakala nakwintengiso zikamabonwakude! Kwaye ufuna ukuba ngumhlobo wakho okanye enye into.
Ubusuku bamehlo akho -USandra Andrés Belenguer
Kubafundi ukusuka kwiminyaka engama-14. Isihloko esinye Mapolisa kodwa nangethoni yothando.
Singaphakathi Dublin apho kukho ezinye ezoyikisayo ukubulala. Amaxhoba ahlala engamadoda eepasile ezithandabuzekayo ngaphandle konxibelelwano olubonakalayo. Okanye umrhanelwa onobuchule umhloli gallagher. Ngeli xesha sinomfazi omncinci Ciara, ohlala kubusuku obubi ekhayeni lakhe ephupha a ikamva elingcono. Ufuna utshintsho oluza kumnceda ukuba aphinde abuyele kulonwabo. Kodwa akazi ukuba, kufutshane kunokuba ecinga, kukho umntu okhathazwa kakhulu ofuna kwaye odinga uncedo nothando lwakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Iincwadi zoLutsha » Iincwadana ezi-5 zoncwadi lolutsha kuzo zonke izinto ozithandayo.
Ukusuka emlonyeni wefilosofi kunye nombhali u-Ayn Rand